Sample sy vidiny - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Fanoloran-tena ho an'ny fahafaham-po feno
Manaraka ny fanantenanao
Ny santionany izay alefa amin'ny mpividy dia tsy maintsy miaina mifanaraka amin'ny antenain'izy ireo satria ny fanapahan-kevitr'izy ireo dia miankina amin'ny kalitaon'io santionany io. Ao amin'ny OEM rehefa mangataka santionany ianao dia tsy avelanay tsy hihemotra ny vato hahazoana antoka fa mahazo santionany namboarina tsara kalitao ianao.
Amin'ny ankapobeny ny vidiny dia miankina amin'ny karazana lamba sy ny kanto vita amin'ny vokatra. Rehefa miasa amina tetik'asa izahay, ny mpamolavola sy ny teknisiana anay dia manatsara ny vidiny rehetra miaraka amin'ny vidiny mifaninana aminao.r mpanjifa).
Fanatsarana sy tolo-kevitra
Mandritra ny fivoaran'ny tetikasa dia mijery hatrany ny lisitry ny sosokevitra hahafantarana izay fanatsarana azo atao amin'ny famolavolana ny vokatra izahay mba hahasarika sy amidy kokoa.
Ny tena ifantohanay dia ny mampanan-karena (ho anao) sy avo lenta (ho an'ny mpanjifa) ny vokatrao.
Omenay fahalalahana tanteraka ny mpanjifanay hilaza ny zavatra ilainy ary milaza izay tadiaviny rehefa tonga any amin'ny OEM izy ireo. Aorian'ny fivoriana roa dia tapaka fa ny sarany fakana santionany dia maimaim-poana na averina.
Fantatsika ny maha-zava-dehibe ny santionany satria izy io dia mitana ampahany lehibe amin'ny famaritana ny vidiny sy ny kalitaon'ny vokatra. Ny tanjonay dia ny hamolavola santionany ny varotra mba hahafahana mametraka azy ho fenitra amin'ny famokarana iray manontolo. Anisan'ny asan'ny ekipa teknisiana anay ny manao lisitr'ireo fanehoan-kevitra ara-teknika ho an'ny ekipa mpamokatra. Ampiarahanay ihany koa ny ekipa fivarotana sy QC ao amin'ny fivorian'ny famokarana mialoha izay tarihin'ny ekipa mpamokatra ary mikendry hianatra momba ny antsipirian'ny baikonao sy ny mampiavaka azy.
Manoro hevitra ireo manam-pahaizana momba ny olan'ny vidiny
Tsy mila mikoropaka ianao raha mahita fa sarotra ny manaraka ny vidiny ary miahiahy ny hahatratra ny tanjonao ianao.
Nandritra ny taona maro, OEM dia nanjary afaka nanamboatra kitapo izay an'ny sokajy rehetra. Izahay dia vonona kokoa hanampy anao amin'ny olan'ny vidinao. Miaraka amin'ireo mpamolavola sy teknisianina manana talenta be dia be izahay dia azo atao ny mizaha safidy maro hafa: lamba hafa, kojakoja ary endrika hafa hifehezana ny vidin'ny tetikasanao.
Io no teny filamatray hanomezana anao ny vokatra mifanaraka amin'ny ilainao indrindra.